Incognito TV APK Download Ho an'ny Android  | APKOLL
March 28, 2022 Janoary 16, 2022 by Ali Quli
Salama daholo! Manantena sy mivavaka izahay mba ho salama daholo ianareo. Ity areti-mifindra mahatsiravina ity dia nisy fiantraikany lehibe teo amin'ny fiainantsika ary tsy afaka manao na inona na inona afa-tsy ny mijanona ao an-trano. Amin'izao fotoana izao noho io olana io dia manana fotoana malalaka izahay ary mahatsiaro ho leo. Mba hamonoana ny fahasorenanao dia eto izahay miaraka amin'ny fampiharana iray izay hampifandray anao mandritra ny fotoana maharitra ary antsoina hoe Incognito TV Apk.
Amin'ny anaran'ity fampiharana ity dia hihevitra ianareo rehetra fa fampiharana amin'ny fahitalavitra na fandefasana sarimihetsika fa tsy izany. Ny fampiharana dia lalana mankany amin'ny lalao sarotra antsoina hoe Flip the Knife. Lalao an-tserasera ity ary mila fifandraisana Internet marin-toerana ianao ho an'ny fanamorana anao manokana. Raha ny anarany dia mety ho mora be ilay izy saingy sarotra be ny mahazo isa dimy.
Ny lalao dia hirotsaka aminao raha tsy raisinao ho fanamby satria sarotra be ny mahazo isa araka ny voalaza teo aloha. Ny zava-dehibe dia ny hifaninananao amin'ireo mpilalao hafa eo amin'ny tabilao. Tsy maintsy mahazo isa betsaka araka izay azonao atao ianao mba ho tonga ambony indrindra amin'ny laharana voalohany saingy tsy ho mora ho an'iza na iza izany.
Ankehitriny dia holazaiko aminao ny fomba fiasan'ny fampiharana sy ny fomba hahatongavana amin'ny lalao. Rehefa mametraka ny fampiharana ianao ary miditra amin'ny fampiharana, dia hisy bokotra lalao eo an-tampon'ny pejy. Tsy maintsy misafidy io safidy io ianao ary miandry mandra-pahatongan'ny lalao. Mariho fa raha tsy manana connexion internet stable ianao dia tsy hivezivezy ny fampiharana anao ary tsy maintsy miandry ianao.
Rehefa feno ny lalao dia mahazo safidy efatra ianao dia ny Play, Settings, Upgrade, ary leaderboard. Fantatrao fa ampiasaina amin'ny inona ny kilalao. Raha ny Setting, izany dia ampiasaina amin'ny fanaraha-maso ny mozika ambadika sy ny feo lalao. Hanavao ianao rehefa manana vola madinika hividianana antsy sy tabilao vaovao hahitanao ny fandrosoanao na amin'ny isa latsaka amin'ny zato.
Momba ny lalao, misy hevitra tsotra hoe tsy maintsy atsipy ambony ny antsy ary apetaho eo amin'ny latabatra. Ankehitriny mba hahazoana isa ambony dia tsy maintsy mifikitra amin'ny toerana marina ianao. Ho fantatrao ny toerana miaraka amin'ny fanampian'ny antsy malazo. Rehefa mahazo isa ambony ianao dia mampitombo ny fahasarotana ny lalao amin'ny fampidirana zavatra samihafa eo amin'ny latabatra izay tsy maintsy ifikiranao ny antsy. Isaky ny mametaka ny antsy eo ambony latabatra ianao dia mahazo teboka iray sy vola madinika dimy. Mila isa ianao mba ho eo amin'ny laharana voalohany.
Endri-javatra manan-danja amin'ny Incognito TV Apk
Tsy ilaina ny fividianana ao amin'ny app
Interface mahasarika maso
anarana Fahitalavitra Incognito
Anaran'ny fonosana incognito.tv
Ilaina ny Android 4.1 sy ambony
Ity dia fampiharana an'ny antoko fahatelo ary ny fampiharana toy izany dia heverina ho tsy ara-dalàna ary tsy izahay no tompon'andraikitra ofisialin'ny fampiharana, ka tsy afaka manome antoka na inona na inona izahay. Na izany aza, tsy hack io amin'ny lalao hafa. Ny mpampiasa rehetra dia afaka mampiasa azy io amin'ny loza mety hitranga.
Ny hany azonay ambara aminao momba ny fiarovana dia ity dia lalao tsotra iray izay ifaninananao amin'ireo mpanohitra amin'ny lafiny isa. Araka ny voalaza teo aloha, tsy izahay no mpamorona ny fampiharana, manome anao rohy fampidinana azo antoka sy miasa ho an'ny fampiharana fotsiny izahay.
Ahoana ny fampidinana ny Incognito TV Apk?
Ity fampiharana ity dia tsy hita ao amin'ny Google Apps Store ofisialy fa azonao atao ny misintona mora foana ny Apk amin'ny alàlan'ny bokotra Download eo ambony sy ambany amin'ny pejy. Hanomboka ny fampidinanao rehefa manindry ny bokotra fampidinana ianao. Ilaina ny miandry segondra vitsy aorian'ny fipihanao ny bokotra fampidinana satria amin'io fotoana io dia efa voaomana hisintona ny Apk anao.
Ahoana ny fametrahana Incognito TV Apk?
Tokony hanaraka ireo dingana nomena ianao raha te hahomby amin'ny fametrahana azy.
Mandehana any amin'ny mpitantana ny rakitrao, tadiavo ny fisie alaina avy amin'ny fampirimana fampidinana.
Raiso ny fanamby handresena ireo mpifanandrina hafa amin'ny alàlan'ny fanamarihana ireo isa avo indrindra ary hanatonana ny lohalaharana
Raha mila bebe kokoa amin'ireo rindranasa ireo ianao dia tsidiho ny anay Website.
Sokajy Entertainment, Home pejy Tags Fahitalavitra Incognito, Incognito TV Apk, App Incognito TV Post Fikarohana
Asisten Click Apk Download ho an'ny Android [2022 Update]